Vaovao - Inona no atao hoe horonan-taratasy? Fampiharana tavoahangin-roller
Inona no atao hoe horonan-taratasy? Fampiharana tavoahangin-roller
Betsaka ny fangatahana fitadiavana teny ho an'ny tarehy roa tarehy: ny iray dia a mihodina amin'ny tavoahangy ary ny iray kosa dia a tavoahangy roller. Saingy karazana vokatra izy ireo.Ny tavoahangy amin'ny tavoahangy dia tavoahangin-roller, fa ny fahazarana mikaroka ny tsirairay dia tsy mitovy. Shanghai Rainbow Industry Co., Ltd. milaza aminao ny atao hoe horonan-taratasy amin'ny tavoahangy sy ny toerana hampiasana azy.
Inona no atao hoe a mihodina amin'ny tavoahangy?
Tavoahangy mihodina, fantatra koa amin'ny hoe tavoahangin-roller, dia karazan-tavoahangy fonosana plastika iray mahazatra ary ampiasain'ny olona betsaka. Ny tavoahangy-ball dia matetika manana fahaiza-manao kely. Apetraka eo amin'ny lohan'ny tavoahangy ny baolina mihodina mba ahafahan'ny olona mampihatra milamina, misoroka ny famoahana rano, ary misy vokany fanorana ihany koa. Amin'ny ankapobeny dia ampiasaina ho fonosana ho an'ny menaka fanosotra kosmetika, lokomena, deodorants, menaka tarehy, menaka manitra, fanafody, gel antipyretika, ary vokatra ho an'ny ankizy. Misy karazany roa nyroller ball eo an-dohany tavoahangy rollerball: baolina plastika sy vy. Amin'ny ankapobeny, ny baomba vy dia ampiasaina amin'ny tavoahangy fanosotra maso, raha ny plastika kosa dia ampiasaina amin'ny vokatra mora vidy toy ny lokomena, miankina amin'ny vidin'ny vokatra.
Ny haben'ny fampiasana ny tavoahangin-roller
Ny kosmetika dia ampiasaina matetika amin'ny tavoahangy mihodina. Raha ampitahaina amin'ny famafazana, ny tavoahangy mihodina dia afaka mampiditra antiperspirant sy menaka fanosotra amin'ny hoditra amin'ny hoditra, ary mahatsapa mangatsiatsiaka ny hoditra aorian'ny fihodinana. Amin'ny toerana voatondro sasany,vokatra mihodina matihanina kokoa.Shanghai Rainbow Industry Co., Ltd.. matihaninamihodina amin'ny mpanamboatra tavoahangy.
Fonosana fanafody dia faritra fampiharana manan-danja hafa ho an'ny tavoahangin-roller. Amin'ny maha mpitondra ny gel antipyretika, ny tavoahangin-rollerafaka manaparitaka ara-drariny ny gel fanafody amin'ny hoditra izay mila manaparitaka ny hafanana, miaraka amin'izay koa, ny fahatsapana mangatsiatsiaka dia mahatonga ny famafana ny hafanana. Izy io dia misoroka ny fahasosorana sy ny tsy fahazoana aina ateraky ny fandroahana hafanana ara-batana nentim-paharazana, ary manatsara ny tsy fitovian'ny fampiharana manual.
Olana tokony hojerena tsara rehefa manao tavoahangy tavoahangy mihodina
Fantatsika fa ny tavoahangy vita dia matetika anaty tavoahangy tanana aorian'ny famokarana ny vatana sy ny satrony. Amin'ny ankapobeny, ny tavoahangy tavoahangy dia mila manenjana moramora ny satrony ihany, izay haingana kokoa, fa ilay tavoahangy mihodina dia manana vakana maro kokoa amin'ny lohan'ny tavoahangy, ka ny mana-tavoahangy dia manahirana kokoa sy mandany fotoana. Ho fanampin'izany, satria nylohan'ny tavoahangy baolina dia baolina vy, hiteraka fanaintainana amin'ny rantsan-tànana izany rehefa voahidy anaty vatan'ny tavoahangy, ary tavoahangy be dia be no hiteraka fahasimban'ny rantsantanana. Noho izany, tsara kokoa ny manaova fonon-tànana hiarovan-tena rehefa mameno ny tavoahangy baolina ianao. Rantsan-tànana.
Shanghai Rainbow Industrial Co., Ltd. no mpanamboatra, Ny marika misy azy dia RB PACKAGE, fonosana avana Shanghai Manome fonosana kosmetika tokana.